Yini iSwag? Ingabe Iwufanele Utshalomali Lwezentengiso? | Martech Zone
Yini iSwag? Ingabe Iwufanele Utshalomali Lwezentengiso?
ULwesibili, May 3, 2022 ULwesibili, May 3, 2022 Douglas Karr
Uma usunebhizinisi isikhathi eside, uyazi ukuthi yini i-swag kuyinto. Ingabe wake wazibuza ngomthombo waleli gama, nokho? I-Swag empeleni yayikhulunywa ngempahla eyebiwe noma impango eyasetshenziswa ngeminyaka yawo-1800s. Isikhathi isikhwama kungenzeka ukuthi bekuwumthombo we-slang… ubeke yonke impango yakho esikhwameni esiyindilinga futhi ubaleke neyakho i-swag. Izinkampani eziqophayo zamukela leli gama ekuqaleni kwawo-2000 lapho zazihlanganisa isikhwama sezipho nezinto ezinophawu kanye nokukhishwa kwe-albhamu entsha… ngethemba lokuthi o-DJ bazonaka kakhulu abaculi babo.
Isu alikashintshi kakhulu… ngaphandle kweqiniso lokuthi akusadingeki ugebe muntu. Vakashela nomkhiqizo ekomkhulu labo noma engqungqutheleni, futhi uvame ukuhlangatshezwa nokuthathwa mahhala… i-swag yakho. Vele, enye i-swag imbi, ishibhile, futhi ingena kudoti wehhotela kuphela. Enye i-swag inhle kakhulu.
Enye yezinto engizikhonzile kakhulu idrayivu ye-USB evela edume umhlaba wonke Indawo yokudlela yase-St. Elmo edolobheni lase-Indianapolis. Lapho ngabelana ku-inthanethi mayelana nohambo olumbalwa lwebhizinisi nomndeni engangiluchithe lapho, ithimba labo lezentengiso langimangaza ngesikhwama se-swag esigcwele izinongo zabo zangokwezifiso, amasoso, kanye naleli gugu elincane. Ngiyihlezi (inothuli) phezu kwedeski lami futhi ihlezi iletha izinkumbulo ezimnandi zendawo yokudlela… kanye ne-cocktail yayo emangalisayo.
Ingabe i-Swag iyasebenza?
Awu, yilokho $ 24 billion umbuzo, akunjalo? Impendulo efanele ithi… kwesinye isikhathi. Ithiyori ngemuva kwe-swag ine-multi-dimensional:
Brand - Ngokufaka uphawu lwesipho samahhala, ungakha ukuqwashisa ngomkhiqizo.
Memory - Ngokuhlinzeka ngento ebonakalayo, ithemba noma ikhasimende lihamba nento elikhumbuza wena, umkhiqizo wakho, umkhiqizo wakho, noma isevisi yakho.
Ukubuyiselwa – Noma nini lapho unikeza umuntu isipho, ngisho noma esincane, kuba nomuzwa wemvelo womuntu esingathanda ukuwubuyisela kulowo muntu.
Abantu bakwa-Sales Hacker benze isivivinyo se-A/B lapho bengeze khona i-swag esicelweni… futhi baze bamangala ngomphumela:
Iqembu elithole i-swag lalinethuba eliphindwe kathathu lokubhukha umhlangano, futhi i-Outreach yabona ukukhuphuka kwenani lethuba ngo-2.42x ngethemba ngalinye eqenjini lokuhlola.
Ngokwami, ngiyazisa okomuntu siqu futhi kuyabiza i-swag kune-crap eshibhile ezogcwalisa indawo yokulahla imfucumfucu. Ikakhulukazi uma kuyigugu ngandlela thize kumamukeli wakho. Kukhona okuhlukile, kunjalo. Angisebenzisi idrayivu ye-USB ye-Shrimp Cocktail… kodwa ipholile kangangokuthi ngiyigcina etafuleni lami.
Ungaklama kuphi, U-oda, Futhi Uphathe I-Swag Yakho?
Bekukade kudla isikhathi ukuklama i-swag, ukucaphuna, noku-oda ngokwanele ukuze ugcine izindleko ziphansi. Iwebhu iqhakaze ngenqwaba yamasayithi lapho ubungakwazi khona ngokushibhile, i-offshore crap obungazi ngekhwalithi yayo. Ngazama iminyaka eminingana ukungena emanzini amahle futhi kwakuhlala kushisa noma kubanda.
I-Swag.com iyisayithi eyakhelwe ngqo ukuthenga i-swag yekhwalithi ephezulu yomkhiqizo wakho. Bakhethe futhi bahlola izinkulungwane zemikhiqizo - futhi bakhawula i-inventory yabo yaba ngu-5% ephezulu yemikhiqizo esemfashinini, edumile, futhi eshiya umbono. Baphinde bazenzela ngokuzenzakalela umuzwa wokuthenga we-swag. Ungathola kalula okufunayo, ulayishe umklamo wakho, wenze inhlekisa ngemikhiqizo yakho, futhi ukhokhe ngemva kwemizuzwana.
I-Swag.com inemikhiqizo yekhaya, ihhovisi, izingubo, iziphuzo, izikhwama, ubuchwepheshe, impilo enhle, futhi banenqwaba yemikhiqizo eyaziwayo abangakhetha kuyo. Ungaphatha ngisho nekhabethe lakho le-Swag ku-inthanethi:
Ngaphandle kokuguqula umkhondo ube amathemba, i-swag ingasetshenziswa ukuklomelisa amakhasimende akho angcono kakhulu, ukwenza imihlangano ye-inthanethi ibe ngumuntu, ngisho nokuxhumana nabasebenzi bakho abakude.
Dala I-Swag Enhle Manje!
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- I-Swag.com futhi ngisebenzisa isixhumanisi kulesi sihloko.
Tags: yenza umsebenzi wokuphilaokunikezwayooda swagukuphindiselai-shrimp cocktailst elmosi-swagswag.comidrayivu ye-usb
Izinyathelo Ezi-4 Zokusebenzisa Noma Ukuhlanza Idatha ye-CRM Ukukhulisa Ukusebenza Kwakho Kokuthengisa
I-CometChat: Umbhalo, Umbhalo Weqembu, Izwi, ne-Video Chat API nama-SDK